कक्षा १२ को परीक्षा छिटो सञ्चालन गर्न अनुरोध – Newssarokar
न्यूज सरोकार । ५ भाद्र २०७८, शनिबार ०६:५०
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले कक्षा १२ को परीक्षा छिटो गर्न अनुरोध गरेकी हुन् । कक्षा १२ को परीक्षा स्थगितलाई समितिले अस्वभाविक रुपमा लिएको सभापति घर्तीले बताइन् ।
उनले अगाडि भनिन्, ‘बिना विकल्प दोस्रो पटक कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरियो । अब छिटो परीक्षा गरेर निकास दिन अनुरोध गर्छु ।’ बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाबारे बोर्डलाई नसोधिएको बताए ।
उनले बैठकमा प्रतिप्रश्न गर्दै ‘परीक्षाको तयारी सकिएपछि परीक्षा रोक्नुपर्‍यो । कुन भेरियन्टले कक्षा १२ को परीक्षा रोकियो’ भनेका थिए । अध्यक्ष पौडेलले परीक्षा रोक्न नहुने बताएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले परीक्षाबारे छिटो निकास दिनुपर्ने बताए । उनले सकिन्छ भने एकै चोटी र सकिँदैन भने दुई चरणमा परीक्षा गराउन सकिने बताए । बैठक कक्षा १२ को परीक्षा र इन्जिनियरिङ कलेज शुल्कको विषयमा बसेको थियो ।
सुर्खेत । केही महिनाअघि मात्रै सल्यान बसाइँ सरेका राउटे समुदाय फेरि सुर्खेत उक्लिएका छन् । सल्यानको कालिमाटी गाउँपापालिकाको च्यूरीबासमा बस्दै आएका यो जातीमा बुधबार एक बालिकाको मृत्यु भएपछि पुनः सुर्खेत फिर्ता भएका हुन् । हाल उनी गुर्भाकोट नगरपालिका–१ सीमसार भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । जंगलमा फिरेन्ते बसोबास गर्दै आएको यो जातीको […]
१० पुष २०७८, शनिबार १९:३५
जुम्लाका २० हजार बालबालिकालाई कोरोना खोप लगाईदै
२५ श्रावण २०७८, सोमबार १८:१९
हुम्लामा पनि ‘तपाईको मास्क खोइ’ कार्यक्रम